Global Voices teny Malagasy » HiperBarrio: Manova Ny Fomba Fijery Amin’ny Alalan’ny Fahaiza-Mamorona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Janoary 2018 18:22 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Miranah
Mamintina  ny asan'i HiperBarrio hatramin'ny volana Oktobra i Izpapalotl. Manasongadina ny sasany tamin'ireo zava-bitan'ny tetikasa hatramin'izao izy.
Nitatitra i Juliana Rincon fa hafa noho ny teo aloha ny atrikasa momba ny fakantsary tamin'ny 10 Novambra satria nivoaka teny an-kalamanjana ny mpandray anjara ary nitsidika ny lalan'i Carabobo ao Medellin mba haka sary. Satria efa nahatratra ny fetra tamin'ny kaonty Flickr HiperBarrio  izy ireo, nampidirina tao amin'ny rakitsary Picasa ny sarin'izy ireo.
Galo, mpandray anjara, miresaka momba ny fihaonany voalohany amin'ny fanitsiana lahatsary . Nampiasa sary sy lahatsary nalaina nandritra ny Herinandron'ny Kolontsaina tao amin'ny Sekoly Fe y Alegría any Santo Domingo izy ireo. Ao amin'ny youtube ireo lahatsary ireo ary ao amin'ny kaonty Flickr ny Medea  ny sary.
Mampiseho mpandray anjara mpifaninana izay nahazo ny laharana faharoa nandihy niaraka tamin'ny namany ny lahatsary. Mandihy ny hira mifangaro tropikaly izy, anisan'izany ny Porro , dihim-paritra malaza any Medellin.
Lahatsoratra roa vaovao no navoaka tao amin'ny bilaogin'ny vondrona Convergente .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/10/112819/
 tetikasa HiperBarrio, : https://rising.globalvoicesonline.org/projects/hiperbarrio/
 Nitatitra : https://rising.globalvoicesonline.org/hiper-barrio/2007/11/12/carabobo/
 kaonty Flickr HiperBarrio: http://www.flickr.com/photos/hiperbarrio/
 rakitsary Picasa : http://picasaweb.google.com/jules.rincon/HiperbarrioEnCarabobo
 fihaonany voalohany amin'ny fanitsiana lahatsary: https://rising.globalvoicesonline.org/hiper-barrio/2007/11/01/first-encounters-with-video/
 Ao amin'ny youtube ireo lahatsary ireo : http://youtube.com/user/medeamaterial
 nivoady hanova : http://convergentes.hiperbarrio.org/2007/10/28/la-loma/
 lahatsoratra farany : http://convergentes.hiperbarrio.org/2007/10/30/suso-la-gratitud-y-la-dignidad-humana/#comments